फिजी छुट्टिहरु, स्वर्ग भ्याकेसनहरू | यात्रा समाचार
यदि तपाईंलाई समुद्र तट मनपर्दछ र तपाईं पर्यटकहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जो समुद्रमा होइन छुट्टीको कल्पना गर्नुहुन्न, सूर्य र बालुवाको साथ भने ... के तपाईंले प्रयास गर्नुभयो? इस्लास फिजी? हो, तिनीहरू कुनाको वरिपरि छैनन् तर यात्रा यसको लागि लायक छ।
यी टापुहरूले एक इन्सुलर गणतन्त्र बनाउँछन् र हुन् ओसिनियामा, ती स्लोभेनियाको अनुमानित आकार हुन् र तपाईले यस पोष्टमा र त्यससँगैका फोटोग्राफहरूमा देख्नुहुनेछ, ती भुल्न गाह्रो छ। जंगलहरू, फ़िरोज़ा समुद्र, तातो, कोरलहरू, सेतो बालुवा मैंग्रोभ्स र लक्जरी होटेलहरू तर ब्याकप्याकरहरूको लागि। भ्रमण गर्नु!
1 इस्लास फिजी
2 फिजीमा कसरी पुग्ने र कसरी वरिपरि पुग्ने
3 फिजीमा गर्नुपर्ने कामहरू
फिजी मूल रूपमा बनेको छ दुई मुख्य टापुहरू, भिति लेवु र भानुआ लेवु, र अरू केही साना टापुहरू जस्तै कोरो, कडाभु, गौ र टवेउनी। सामान्यतया तिनीहरू ज्वालामुखी टापुहरू हुन् र यदि हामी पृथ्वीमा उनीहरूको स्थानमा बढी निर्दिष्ट छौं भने हामी उनीहरूलाई ती टापुहरू हौं जुन ती समूहको हो मेलानेशिया र टोंगा र भानुआटु नजिकै भेटियो।
छोरा पहाडी टापु, 900 ०० मिटर भन्दा बढी उचाइ र केही उर्वर मैदानहरू सहित। पनि छ मैंग्रोभ्स, जंगल, कोरल चट्टानहरू पानी मुनि र एक धनी वनस्पति र जीव जन्तु। सबै चीज धन्यवाद धन्यवाद आर्द्र मौसम गर्मी मा सबै भन्दा बढी छैन तापनि कि शासन गर्दछ। सब भन्दा उत्तम महिना १ May र २ º सेन्टिग्रेड र डिसेम्बर र अप्रिल बीचको तापक्रम २२ र º 19 डिग्री सेल्सियस बीच मेदेखि नोभेम्बरसम्म हुन्छ।
यो बाट टाढा जाने सल्लाह छ वर्षा ऋतुजुनदेखि अक्टुबर बीच। ठीक यूरोपियन गर्मी मा! फाइदा लिनु! केहि थप डाटा? यो भन्न लायक छ यी टापुहरू मलेरिया, पहेलो ज्वरोबाट मुक्त छन् वा अन्य उष्णकटिबंधीय रोगहरू। भाग्यमानी! अर्कोतर्फ, यहाँ मानिसहरू विनम्र र परम्परागत छन्, होटेलमा यति धेरै होइन तर यदि तपाईं गाउँमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने विनम्र हुन कोसिस गर्नुहोस्।
यो मुद्रा हो फिजी डलर ,, १०, २०, and० र १०० र केही सिक्काको बिलको साथ। बैंकहरू बिहान :5: at० बजे खोल्छन् र अपराह्न close बजे बन्द हुन्छन् यद्यपि मुद्रा विनिमय एजेन्सीहरू छन् जुन नाडी एयरपोर्टमा दिनको २ 10 घण्टा काम गर्दछन्। वर्तमान हो २240० भोल्ट, 50० हर्ट्जमा। प्लगहरू अस्ट्रेलियामा प्रयोग गरिएको जस्तै--prong हुन्।
फिजीमा कसरी पुग्ने र कसरी वरिपरि पुग्ने
हवाईजहाजबाट संसारको कुनै पनि भागबाट। लस एन्जलसबाट १० घण्टा उडान छन्, उदाहरणका लागि। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो नाडी एयरपोर्ट र यो भिति लेउव टापुमा छ। जब तपाईं स्वचालित रूपमा आइपुग्नुहुन्छ चार महिना भिसा वैधता, यद्यपि यो लगभग सामान्य छ, तपाईको देशलाई त्यो सूचिमा छ भनेर स्पष्ट रूपमा देखाउन सधैं सल्लाह दिइन्छ।
यहाँ एक पटक वरिपरि हुनु सजिलो र सस्तो छ। मुख्य टापुहरूमा राम्रो छ बस नेटवर्क र सार्न को लागी टापुहरू बीच डुry्गा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ ट्याक्सीहरू पनि छन् र तपाई कमसेकम दुई ठूला टापुहरू पत्ता लगाउन कार भाडामा लिन सक्नुहुन्छ, जुन सडक नेटवर्कको% ०% को लागि जिम्मेवार छ। फेरीको अलावा त्यहाँ साना पनि छन् प्लेन वा डु boats्गा वरपरका टापुहरूमा जान र जान।
त्यहाँ दुईवटा घरेलु एयरलाइन्सहरू पनि छन् जुन सब भन्दा महत्त्वपूर्ण टापुहरू बीच सञ्चालन हुन्छन र अन्य टाढाका टापुहरूमा सेवाहरू पनि हुन्छन् यद्यपि तिनीहरू कम कम हुन्छन्। यदि तपाईंलाई क्रूज मनपर्दछ भने तपाईं जहिले पनि भाँडामा लिन सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई लैजानुहोस्। पर्यटन वेबसाइट मा तपाईंसँग यो सबै जानकारी छ र सुपर पूर्ण छ।
फिजीमा गर्नुपर्ने कामहरू
तपाई फिजीमा प्रवेश गर्नु हुनेछ नादी एयरपोर्टबाट उही नामको शहरको टापुको पश्चिम तटमा अवस्थित Viti levu। यहाँ धेरै होटलहरू छन् र तपाईं यसको भ्रमण पछि आफ्नो बाँकी यात्राको तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ।
धेरै पर्यटकहरू सामान्यतया उफ्रन्छन् डेनाराउ टापु, तटको अगाडि अवस्थित,aटापु रिसोर्ट छोटो तटबन्ध द्वारा मुख्य टापुमा जोडिएको छ कि पूर्ण। नादी र देनाराव बीचमा कम्तिमा १० किलोमिटर दूरी छ र यस टापुमा कुनै पनि होइन र आठ विशाल रिसोर्ट्स, सुन्दर समुद्री तट र १--प्वाल गोल्फ कोर्स पनि छैन।
पुलहरू, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका रेस्टुरेन्टहरू, पसलहरू, प्रकृति भ्रमण र पर्यटकले आराम गर्न चाहने सबै कुरा। तपाईं ट्याक्सीबाट आइपुग्न सक्नुहुन्छ वा होटलको यातायात सेवाको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र यो यहाँबाट छ कि तपाईं पनि यसमा जानु सक्नुहुन्छ मामानुका वा यासावा टापुहरू क्रूज र फेरीहरू हरेक दिन सञ्चालनको साथ।
को मामानुका टापु तिनीहरू नादी एयरपोर्टको टापुहरूको नजिकैको समूह हो र तिनीहरू फिजीको उत्तम पोष्टकार्ड हुन्: नीलो पानी, सेता समुद्र तट, नरिवलसहितका खजूरका रूखहरू। यदि तपाईंलाई पानीको खेल मनपर्दछ भने यो राम्रो स्थान हो र समान यदि तपाईंको स्कूबा डाइभिंग र स्नोरकेलिंग छ भने। यहाँ बाट सबै प्रकारका आवासहरू छन् लजहरू केवल सर्फ गर्न चाहने ब्याकप्याकरहरूको लागि ठाउँहरूमा।
Mamanucas को उत्तर छन् यासावा टापु, एक गन्तव्य कुनै पसल वा बैंक छैन, केहि अधिक कठोर र सभ्यताबाट टाढा। एक पटक यी टापुहरू क्रूज जहाजहरूको लागि मात्र पहुँच योग्य थियो र कोही पनि बस्न सक्दैनन तर राम्रो कार्यक्रमको साथ पारिस्थितिकी सरकार द्वारा प्रचारित कि परिवर्तन भएको छ र सबैले यसको महान बिच को आनन्द लिन सक्दछन्।
जबकि यहाँ केहि शानदार रिसोर्टहरू छन् वास्तवमा यो एक सरल गन्तव्य हो। ब्याक प्याकरहरूको लागि आदर्श स्थानीय बासिन्दाद्वारा सिधै प्रबन्ध गरिएको त्यहाँ बस्ने ठाउँहरू छन्।
यासावा बनाउनका लागि लोकप्रिय छन् स्नोर्केल, पाल, कयाक, पौंडी, माछा, गाउँहरू, वा ग्रिल भ्रमण गर्नुहोस्। यस टापुको उत्तरी भागमा गुफाहरू छन् र यदि तपाईं शार्क र स्टिंग्रेजबाट डराउनुहुन्न भने तपाईं नजिकैको कुटा वा द्रवाका टापुहरूको पानीमा डुबुल्की मार्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा, यासावा पुग्नको लागि या त नाडीबाट आधा घण्टा समुद्री यात्रा यात्रा वा एक सजीलो फेरी सवारी समावेश छ।
अब जब तपाई नक्सामा हेर्नुहुन्छ भने यसै पट्टि भिती लेवु टापुको छेउमा टापु पनि हो भानुआ लेवु, एउटा टापु कम पर्यटक तर केवल रोचक। यसको राजधानी साउसुभावमा छ र यो प्राकृतिक प्रमोदवन हो। तपाईं साँच्चिकै सुन्दर B & Bs, backpacker होटेल वा तटमा निर्मित रिसोर्टहरूमा रहन सक्नुहुन्छ।
सामान्यतया, यो अधिक पर्यटन क्षेत्रमा छन्, डाइभि exc भ्रमणको वरिपरि केन्द्रित: नाटेवा बेमा तपाईं डल्फिनहरूसँग पौडिन सक्नुहुन्छ, वासाली नेचर रिजर्भमा तपाईं पैदल यात्रा गर्न र शानदार दृश्यहरूको आनन्द लिन वा कार भाँडामा लिन र हिबिस्कस राजमार्ग गर्न सक्नुहुन्छ।
नादीबाट यस टापुसम्म तपाईं त्यहाँ वा जहाजबाट डु fer्गामा जान सक्नुहुन्छ। टापुमा यो बसबाट सर्नका लागि उत्तम हो, त्यहाँ सेवा छ जुन साभासावु शहरलाई लाबासाको साथ जोड्दछ वा तपाईं ट्याक्सीबाट पनि सर्न सक्नुहुन्छ। अन्तमा, कोरल कोस्ट भ्रमण र रमाईलो बिना फिजी टापुहरू छोड्न केही पनि छैन: white० किलोमिटर सेतो समुद्र किनार र लुकेका खाडीहरू भिटी लेवुको दक्षिणी तटमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » ओशिनिया » फिजीमा छुट्टि, स्वर्गमा छुट्टीहरू